भारतमा अबको १२५ दिन क्रिटिकल हुने, नेपालपनि थप सतर्क हुनुपर्ने, अगस्ट अन्त्यसम्म तेस्रो वेभ सुरु हुनसक्ने आंकलन | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
भारतमा अबको १२५ दिन क्रिटिकल हुने, नेपालपनि थप सतर्क हुनुपर्ने, अगस्ट अन्त्यसम्म तेस्रो वेभ सुरु हुनसक्ने आंकलन
२०७८ साउन २, शनिबार, ६: ३०PM
काठमाडौं । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ संक्रमणको हिसाबमा अबको १०० देखि १२४ दिन निकै कष्टकर हुने बताएको छ । शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा भारतीय नीति आयोगका सदस्य डा. वीके पौलले यस्तो बताएका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डा. पौलले यस्तो बताएका हुन् । आगामी जुलाईसम्म ५० करोड डोज खोप लगाइसक्ने योजना रहेको पनि उनले जनाए । यसका लागि ६६ करोड डोज कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोप खरिद गरिएको पनि उनले जनाए ।
अगस्ट अन्त्यसम्म भारतमा तेस्रो वेभ सुरु हुनसक्ने पौलको आंकलन छ । भारतको संक्रमण दरमा उल्लेख्य गिरावट आउन नसकेको बताउँदै उनले यसबीचमा रोकथामका प्रयत्न नभए तेस्रो लहर सुरु हुने उनको भनाई छ ।
‘भाइरस अहिलेपनि हामी वरपर छ । केही जिल्ला र राज्यमा पनि अहिले स्थिती जोखिमपूर्ण छ । हामी यो समयमा निकै सचेत हुनुपर्छ किनभने पुनः संक्रमण बढ्न सक्छ । यो हाम्रा लागि खतराको घण्टी पनि हो’ पौलले भने, ‘परिस्थिती अहिले नियन्त्रणमा छ तर, भविष्यमा बाहिर जान सक्छ । परिस्थितीलाई कता लैजाने छ भन्ने हाम्रो हातमा छ ।’
नेपाल थप सतर्क हुनुपर्छ
भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो अभिव्यक्ति आउने वित्तिकै नेपालको समकक्षी मन्त्रालयले पनि थप सतर्क हुनुपर्ने बताएको छ । प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले भारतमा वेभ सुरु भएको तीन चार सातामै नेपालमा आउन सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने जरुरी भएको बताए ।
भारतमा अगस्ट अन्त्यमा तेस्रो लहर सुरु हुनसक्ने मन्त्रालयको आंकलन छ ।
‘नेपालमा अहिले पनि जोखिम टरिसकेको छैन । भारतको भनाई आएपछि हामी थप सतर्क हुनुपर्ने देखिएको छ’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अहिले पनि हामीले सर्तसहित निषेधाज्ञा खुुकुलो बनाएका हौं । जोखिम अहिले पनि छ ।’
अघिल्लो लेखमासंसद् सचिवालयका तीनजना कर्मचारीमा देखियो कोरोना
अर्को लेखमाविद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गरिने, तर नेपालभर कहिले?